क्रिसमस को रहस्य, एक ब्रान्ड नयाँ स्लट सुविधाहरू डिजाइन गरिएको छ कि खेल तत्काल क्रिसमस को मूड सेट हुनेछ भन्ने छ. प्रदर्शनमा गुणस्तर ग्राफिक्स संग, यो स्लट खेल अद्भुत गेमप्ले र उच्च जीत सुविधाहरू ईन्जिनियर गरिएको छ. यो स्लट मुक्त spins संग लोड खेलाडीहरू आनन्द सुविधा लागि र यो देखि सबै भन्दा जीत. अगाडि जानुहोस् र यो सुन्दर स्लट खेल संग वर्ष को मनपर्ने समय मनाउन.
एक उच्च इनामदायी बोनस सुविधा संग, तपाईं सही यस क्रिसमस-THEMED स्लट खेल मा रील स्पिन भने जीत प्रशस्त छन्. विभिन्न उपकरणहरूमा प्लेएबल, यो स्लट को रील मा अद्भुत प्रतीक संग एक रोचक स्लट खेल हो; खेलाडीहरू जीत को लागि यो खेल क्रिसमस आश्चर्य छ. नेत्रहीन मनमोहक र एक शानदार गेमप्ले सुविधा, त्यहाँ यो एक अत्यावश्यक-प्ले बनाउँछ भन्ने प्रशस्त सुविधा छ.
क्रिसमस को रहस्य विकासकर्ता बारे
क्रिसमस को रहस्य NetEnt तिनीहरूले विकास गुणस्तर खेल ज्ञात छ, जो द्वारा विकसित गरिएको छ. तिनीहरूले क्यासिनो खेल प्रशस्त सिर्जना गरेका र प्रत्येक गुणस्तर ग्राफिक्स छ र यसलाई सुविधाहरू गेमप्ले लागि सराहना गरिएको छ. तिनीहरूले खेलाडीहरू सबै भन्दा राम्रो अनुभव दिन प्रयास गर्ने iGaming उद्योग मा सबै भन्दा प्रसिद्ध नाम को एक हो.
को गेमप्ले थप
त्यहाँ छन्5रील र 25 खेलाडी लागि paylines साथ खेल्न र सिक्का आकार देखि दायरा 0.25 गर्न 125.00. आफ्नो बाजी थाप्न र त्यसपछि रील स्पिन गर्न सुरु बटन क्लिक गर्नुहोस्, प्रत्येक समय खेलाडी मुलुकमा प्रतीक मिल्ने, त्यहाँ जीत हुनेछ आफ्नो बाटो आउँदै. खेल पनि निःशुल्क spins विशेषताहरु, बोनस दौर र खेलाडीहरू सबैभन्दा जीत लागि थप.
क्रिसमस घण्टी उच्चतम तिर्ने प्रतीक हो र तपाईं तिर्न सक्नुहुन्छ 1250 पटक शर्त आकार. सांता थप हुनेछ विजेता संयोजन र तिमी जंगली संग भूमि कि जीत पूरा गर्न अन्य प्रतीकहरू विकल्प हुनेछ कि जंगली छ. अर्कोतर्फ मा स्क्याटर निःशुल्क spins र बोनस राउंड्स सक्रिय हुनेछ जो खिलौने को बोरा प्रतिनिधित्व. उच्च तिर्ने प्रतीक र सुविधाहरू सबैभन्दा सबैभन्दा जीत बनाउन.
आफ्नो बाजी थाप्न, को रील स्पिन र त्यसपछि शीर्ष स्लट साइट क्यासिनो मा क्रिसमस को रहस्य प्ले. को स्क्याटर लागि बाहिर हेर्न, जंगली प्रतीक, र अन्य विशेष प्रतीक हरेक स्पिन संग थप जीत.